Isebenza njani imo ye-incognito yeGoogle Chrome kwi-Android | I-Androidsis
Imowudi ye-incognito isebenza njani kuGoogle Chrome
UEder Ferreño | | Ukukopela kwe-Android, Tutorials
IGoogle Chrome yenye yezona zicelo zibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android. Ngombulelo kuyo, siyakwazi ukukhangela i-Intanethi ngalo lonke ixesha, nokuba siphi. Ukongeza, ukuhamba kwakho kunokuba lula, njengoko sibonile ngamaqhinga amaninzi. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwisikhangeli yimowudi ye-incognito. Nangona abaninzi bengazi ukuba isebenza njani.
Abasebenzisi abaninzi bayisebenzisa xa bekhangela kwiGoogle Chrome Kwi-Android. Ukuze babe nakho ukuhamba ngendlela yabucala. Nangona ayisiyiyo ukukhangela ngasese, ngendlela efanayo kwenzeka xa sisebenzisa iVPN kwifowuni yethu, injani kunokwenzeka ngeeapps.
1 Imowudi ye-Incognito kuGoogle Chrome
2 Imowudi ye-incognito isebenza njani kuGoogle Chrome
3 Kutheni usebenzisa imo ye-incognito yeGoogle Chrome?
Imowudi ye-Incognito kuGoogle Chrome
Xa sisebenzisa imo ye-incognito kwiGoogle Chrome, kwenzeka ntoni akukho maphepha esiwatyelelayo aya kugcinwa kwimbali ukukhangela. Ke ukuba omnye umntu ukhangela le mbali, ngekhe babenakho ukubona nayiphi na iwebhusayithi ebesikade siyiyo ngelixa besisebenzisa le ndlela ikwisixhobo. Nangona abanye abasebenzisi benoluvo oluphosakeleyo xa besebenzisa le ndlela.
Kuba bacinga ukuba yimowudi yabucala, ukuze kungabikho mkhondo xa ukhangela. Kodwa nangaliphi na ixesha uye ungaziwa okanye ungabonakali xa usebenzisa imo ye-incognito kwiGoogle Chrome. Kuba idilesi ye-IP yomsebenzisi yinto eya kuba nakho ukuqhubeka nokubhalisa ngelo xesha. Le yinto ebalulekileyo ekufuneka uyigcine engqondweni xa usebenzisa le ndlela.
Ngelixa abasebenzisi abaninzi benza impazamo yokucinga ukuba yindlela yabucala. Kodwa kwenzeka nje ukuba into oza kuyityelela kwi-Intanethi ayizukugcinwa kwimbali. Le yinto ekuvumela ukuba usebenzise le ndlela kwiGoogle Chrome ukuya ndwendwela ezo webhusayithi ungafuni ukuba omnye umntu azibone. Ngapha koko, le yindlela eqhelekileyo yokuyisebenzisa, njengabantu abafuna ukubona umxholo wabantu abadala kwisikhangeli, ngaphandle kokushiya umkhondo wayo.
Kwenzeka ntoni kule meko kukuba iGoogle Chrome Ayizukugcina imbali yephepha okanye ii-cookies zezi webhusayithi. Kwakhona, ukuba ugcwalisa iifom ngelo xesha kwimowudi ye-incognito, ulwazi aluyi kugcinwa. Ngokungafaniyo nokwenzekayo ukuba ukhangela ngesiqhelo kwifowuni. Ekupheleni kolu hlaselo, isikhangeli sisusa i-cache kunye nedatha eshiyeke ngqo kwisixhobo.
Nangona usebenzisa imo ye-incognito kwaye ukhuphele ifayile kwi-Android, isazakuboniswa kwisixhobo. Ke ukuba uya kwifolda yokukhuphela, uya kukwazi ukuyibona apho ngamaxesha onke ngesiqhelo. Ayizukufihlwa ngokuzenzekelayo okanye icinywe nangaliphi na ixesha. Ke ukuba ukhuphele into ongafuniyo ukuba ibonwe mntu, kuya kufuneka ujonge le folda ngalo lonke ixesha.
Kuya kufuneka uhlale ukhumbula ukuba ukuba usebenzisa imo ye-incognito kuGoogle Chrome, okanye ukukhangela ngasese kwezinye izikhangeli kwi-Android, Oku akuthethi ukuba kuya kukukhusela kwi-Intanethi. Ke iiwebhusayithi ozindwendwelayo ziya kuqhubeka nokurekhoda ulwazi lwakho. Njengoko besesitshilo, baya kuyirekhoda idilesi ye-IP. Nangona ingekuko oku kuphela, baya kwazi ukuba leliphi ilizwe olindwendwelayo, kunye nenye idatha yesixhobo. Ayitshintshi kwindlela yokuhamba yesiqhelo.
Kutheni usebenzisa imo ye-incognito yeGoogle Chrome?
Inyani yile yokuba le ndlela ye-incognito kwiGoogle Chrome inokuba neenjongo ezininzi kunokuba ucinga. Njengoko abanye banokuqaphela ngamanye amaxesha, xa betyelele iiwebhusayithi ukuthelekisa amaxabiso emveliso, ii-cookies ziyagcinwa. Oku kuthetha ukuba kwiimeko ezininzi amaxabiso aphantsi awazukubonwa. Ngamanye amaxesha, usebenzisa imo ye-incognito kwisikhangeli amaxabiso aphantsi anokubonwa kwezinye iiwebhusayithi. Kodwa kuxhomekeke kwiwebhu, ii-cookies kunye nemveliso.
Kwelinye icala, yindlela elungileyo yokwenza uzulazule ngaphandle kwayo yonke into oyenzayo igcinwa. Ke unokukhangela kuGoogle Chrome ngoxolo lwengqondo, ngaphandle kokukhathazeka ngembali okanye ngenxa yokuba yonke into igcinwe kwiakhawunti yakho kaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Imowudi ye-incognito isebenza njani kuGoogle Chrome
INokia 6.2 iya kuziswa kule ntwasahlobo
I-Oppo iyila kwakhona i-logo yayo: inokuba sisiqalo senqanaba elitsha lenkampani